एकै जना मानिसको १३ ओटी श्रीमती, ती १३ ओटै श्रीमती एकैचोटी गर्भवती – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/एकै जना मानिसको १३ ओटी श्रीमती, ती १३ ओटै श्रीमती एकैचोटी गर्भवती
एजेन्सी । एउटा पुरुषको श्रीमती एउटा नै हुन्छ । कसैकसैले २ देखी तीसम्म बिहे गरेको हामीले देखेका र सुनेका छौं । तर कोहि मानिसको १३ जना श्रीमती हुनसक्छ ? अवश्य सक्दैन । मानिलिउँ १३ जना श्रीमती भएपनि के ती १३ जना श्रीमती एकैसाथ गर्भवती हुन सक्छन् त ? पक्कै सक्दैनन् । तर यो असम्भव सम्भव भएको छ । सुन्दा देख्दा र पढ्दा आश्र्चय लाग्ने यो कुरा साँचो हो ।
प’त्याउनै गाह्रो हुने यो घ’टना नाइजेरीयाको हो । जहाँ एक श्रीमानले आफ्नी १३ श्रीमतीलाई एकैसाथ गर्भवती बनाएका छन् । १३ वटी श्रीमतीहरुलाई एकैपटक गर्भाधारण गराएर नयाँ रेकर्ड राखेका उनले यस घ’टनाले आफु निकै उत्साहित भएको जनाएका छन् । उनकी १३ श्रीमतीहरुको गर्भाधारण पाँच हप्ताको अन्तरमा छ ।
अझ अचम्मको कुरा त के छ भने यी सबै श्रीमतीहरु एकै ठाउँमा बस्दछन् । र उनीहरुबीचमा निकै आत्मियता छ । १३ श्रीमतीका श्रीमान्ले आफ्ना सबै श्रीमतीलाई एकआपसमा बराबर माया दिएर राखेका छन् ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
टोखा घटना सेलाउन नपाउँदै उपत्यकामा फेरि घरभित्रै मृत भेटिए दम्पती, घटनास्थलमा फेला परे यस्ता चिज
साम्राज्ञीको लाञ्छना, भुवन केसीको उत्तेजना !
रमेश प्रसाईलाई झापामा भव्य सम्मान अदालतले नेताहरुलाई लड्डी लगाएर औकातमा ल्यायो भन्दै खुसी व्यक्त गरे (भिडियो सहित)
मुग्लिनबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको ट्रक ठोक्किँदा २ जनाको मृ’त्यु, २ गम्भीर घाइते !